Posted by nu-san at 8:47 AM
မရေ..ဆယ်ကျော်သက်ကနေစပြီး လက်ရှိဘ၀ထိ ရေးသွားတာ သိပ်မိုက်တာပဲ...။ လေးမ လည်း လွင်မိုးလို အရပ်မြင့်၂ လိုချင်တာ..ဟိ..ကောင်းကင်ကြီးက လွင်မိုးထက် ၂ လက်မလောက်နိမ့်တယ်.... ။
(ယောင်္ကျားလေးတို့ တတ်အပ်တဲ့ ပညာရပ်အားလုံးလည်း တတ်ပါသေးတယ်။ ) ..ဟိ...ဘာတွေတုန်း..မ..ရ..။
လေးမတို့လည်း...မ..တို့လိုပဲ.... ခုထိ ရန်မဖြစ်ဖူးသေးဘူး...လေးမ က ရန်ဖြစ်ကြည့်ရအောင်ပါဆိုတာ ကို မဖြစ်ချင်ဘူးတဲ့...။
မနုစံနှင့် မနုစံ၏ ကိုကို .... ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်ပါစေ...ရှင်..။
ဟားဟား အမ-နုစံရဲ့ လက်တွဲဖော် အကြောင်း သိသွားပြီကွ၊ လေးမကတော်တယ်၊ သူ့ကြောင့် အားလုံးရဲ့ အကြောင်းတွေ စပ်စုလို့ ရပြီကွ၊ ဒါပေမယ့် ကိုယ့် အကြောင်းကိုတော့ xxxxxxxxx :P. လုပ်ချင် ပေမယ့် မရပါလားနော်၊ ဒါကြောင့် နဲနဲ ကြာနေတာ ဘယ်လိုရေးရမလဲလို့၊ ဟိ၊ အမ နု-စံတို့ ဘ၀လေး သာယာချမ်းမြေ့ပါစေ၊ သက်ဆုံးတိုင် အိုအောင်မင်းအောင် ပေါင်းရပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်
ဟားဟား..အချစ်မှာအကြောင်းပြချက်မလို သီချင်းလေးပါထည့်လိုက်တယ် ...
ရေးထားတာ အရမ်းကောင်းတယ် အရင်ကတွေးခဲ့တဲ့ လွင်မိုး တို့ ကိုးရီင်္းးမင်းသားလေးတို့ လို အစ်မရဲ့ ချစ်ချစ်က မဟုတ်ပေမယ့် စိတ်ရှည်ပြီး သီးခံတတ်တယ် ဆိုကတည်းက အရမ်းကံကောင်းတာပေါ့ဗျ.......
I have no reason ဆိုတဲ့ အဖြေလေိးကုလဲ သဘောကျတယ် ....
အစ်မတို့ဇနီးမောင်နှံ ရတုအဆက်ဆက် ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ...
P.S ကျနော့်ကိုလဲ ၀ိုင်းဆုတောင်းပေးအုံးနော့် ကြောင်မလေးတော့ ဟုတ်ဘူးးး) ။
နုစံရေ..ရိုးရိုးလေး နဲ့ ရိုမန်တစ်း))
ဦးဝတုတ်ကြီး တော့..ပုံပေါ် ပြီ..
မဒမ်ဝတုတ်..ဘလော့ဂါ ကိုတော့..ပုံမပေါ် သေးဘူး။
Wow...a good post.So natural & lovely.Wishing you2 love to next 100 years :)
Very nice post A Ma.It's so frank and natural.I believe you two will always have this peaceful life.
အဟီး-- မလေးမ tagလိုက်တာ ဘလော့ဂါမမတွေလည်း ပေါ်ကုန်ပြီ။ အချစ်မှာ အကြောင်းပြချက်မလိုဆိုလို့ အလုပ်လုပ်တုန်းက ညီမလေးတစ်ယောက်ပြောတာ သွားသတိရတယ်။ သူ့ကိုကြီးကို ဘာကြောင့်ချစ်တာလဲလို့ အမေးခံရတိုင်း "reasonမရှိဘူး၊ လူကိုချစ်တာလို့ " ဖြေလေ့ရှိတယ်။ သူပြောမှ စဉ်းစားမိတယ်။ ဟုတ်တာဘဲနော်။ ကိုယ့်ကိုမေးတုန်းက ဘာဖြေရမှန်းမသိတာ။ အခုဆို ဖြေတတ်သွားပြီ။
ချစ်ခြင်းတွေ၊ နားလည်မှုတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အမတို့ရဲ့အိမ်ထောင်လေး အမြဲသာယာ ခိုင်မြဲပါစေ။ တီတီတာတာ ရတနာလေးတွေလည်း တိုးပွါးပါစေနော်။
Great Post and story. Yeah.. We have no reason to love but Love, itself isareason.. Cheers!!! Good Luck in your lives, lucky couples!!!
u really can write well!
simply story..enriched by ur touch!
after reading ur post, i feel so so .....simply dun no how to describe the feeling!
i like it so so much that i have read it thrice adn goign to print it out to keep it!
wish both of uablessed life!
hope too tat i can find one as loving as u have describe :)
မနုစံရေ လာဖတ်သွားတယ် ခရီးသွားနေလို့ နောက်ကျသွားတာဗျ။ မိုက်တယ်ဗျာ။ ယောက်ျားတို့ တတ်အပ်သော ပညာလဲ ကျူရှင်ယူချင်သား ဟီးးးး သင်ပေးပါလို့ ပြောပေး :P
မနုစံရေ့့့ လာဖတ်ပြီး အားကျသွားပါတယ်နော်။ အားပေးလျက်ပါနော်။ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး ပျော်ရွှင်ပါစေနော်။
အစ်မရဲ့ လက်တွဲဖော်အကြောင်းဖတ်သွားတယ်နော်။ ကိုယ်မှန်းထားတာနဲ့ တကယ့်လက်တွေ့ကျတော့ တူတာလည်း ရှိတယ် မတူတာလည်း ရှိတယ်။ တကယ်လက်တွဲသွားရမယ့်သူက ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေနေရင်တော့ ၀မ်းသာစရာပဲပေါ့နော်။ အစ်မ ရေ ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်။
လေးမ>> လေးမရေ.. ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေလို့ အမကလည်း ထပ်ဆင့်ဆုတောင်းပါတယ်ရှင်။ ရန်မဖြစ်ချင်ပါနဲ့ လေးမရ။ ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကောင်းပါဘူး.. :)
အော်.. ????? xxxx !!!!! အဲဒါတွေပေါ့ လေးမရ.. သိတယ်ဟုတ်.. :D
ချစ်လေပြေ>> လေပြေရေ.. လေပြေ့အကြောင်းလည်း သိချင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါ့.. လေးမကတော့တော်တယ်.. အဲဒါ အမလည်း ထောက်ခံတယ်.. :D
မောင်မျိုး>> မောင်မျိုးလည်း လူမလေးနဲ့ အဆင်ပြေပါလို့ အမဆုတောင်းပေးပါတယ်.. ကဲ.. ကျေနပ်ပြီဟုတ်... :D
မကေ>> ဦးဝတုတ်ပုံပေါ်လာပြီလား ..အဟဲ.. မဒမ်ဝတုတ်က သူ့ထက် ပိုချောတယ်လို့ အကြမ်းဖျင်း မှတ်ထားလိုက်နော် အမ.. :D
Anonymous>> Thanks for your comment and kind wish. May your blessing comes true.. :)
Tone Tone's Mom>> Thanks and same to you!
မြရွက်ဝေ>> ဖြေတတ်သွားပြီလား ညီမလေး.. :P
တီတီတာတာ ရတနာ တွတ်တွတ်လေးတွေတော့ လိုချင်သား.. ဟား.. ဟား... ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေရှင်.. :D
သက်ဝေ>> လာလည်ပြီး ၂ ခေါက်ဖတ်သွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ သက်ဝေ.. :)
Khun Mya Hlaing >> Thanks.. thanks.. thanks..... x infinity :P
Thyda>> yes.. of course ha...ha... :D
Dilobear>> Thanks dilo lay.. Wish you "May your dream comes true!!"
မုတ်သုန်>> ဘာတွေ စပ်စုသွားလည်း မုတ်သုန်ရေ.. :D
ကိုသင်္ကြန်>> ကျူရှင်ယူမလို့လား အင်း. ပြောပေးမယ်နော်.. ကိုသင်္ကြန်အတွက် အနီးကပ် ရက်တိုသင်တန်း ဖွင့်ခိုင်းပေးမယ်နော်... :D
မလု>> မလုရေ.. လာလည်တဲ့အတွက်ရော ဆုတောင်းပေးတဲ့အတွက်ရော ကျေးဇူးပါ အမရေ.. :)
၀င်္ကဘာလေး>> ငြိမ်လှချည်လားညီမလေးရေ... ဆုတောင်းပေးတာ ကျေးဇူးပါ ညီမရေ.. :)
သုနှင်းဆီ>> ဟုတ်တယ် မွန်ရေ.. အမ အရှုတ်တွေ လုပ်နေရလို့ အသစ်မတင်နိုင်တာ။ လာလည်တာ ကျေးဇူးပါ :)
မနုစံရေ... ဘ၀လက်တွဲဖော် ရေးတာလေး လာစနည်းနာတာ...
အဲဒီ ဦးဝတုတ်ကြီး ပေါ့ဗျ။ ရုံးက ကလေးတွေ အကုန်လုံးကို game ကစားတတ်အောင်လုပ်သွားတာ။
ကျနော်က 2006 မှာ Tokyo ကိုရောက်တာပါ..
ဆရာစံ တို့နဲ့ လဲတဲ့အသုတ်ကပေါ့..
Japan က အကြောင်းတွေ ဖတ်ရတော့
နေခဲ့ရတဲ့ တစ်နှစ်တာကို သတိရမိပါတယ်..
ဆရာစံ နဲ့ Company က သူငယ်ချင်းများ ကိုလဲ သတိတရနဲ့ပေါ့..